Listen to Shirish Ko Phool Episode: 3.
उज्यालो ९० नेटवर्क बाट प्रसारण हुने कार्यक्रम श्रुतीसम्बेग विगत केही हप्ता देखि ब्लग बाट पनि बज्दै आएको छ । श्रुतीसम्बेग को यो अंकमा पारिजात को बहुचर्चित उपन्यास 'शिरिष को फूल' को तेस्रो अंक लिएर उपस्थित भएका छौँ ।
सकम्बरी सँग को एकतर्फी प्रेमले भित्र भित्रै खोक्रो भएको सुयोगविर ले के गर्लान् त ? आज को शिरिष को फूल को अंक यही कुरा को वर्णन सँगै अघि बढ्दै गएको छ । अत: सुन्नुहोस्, श्रुती सम्बेग को यो अंकमा पारिजात को शिरिष को फूल । सदा झैँ, श्रुतिसम्बेग को वाचन अच्युत घिमिरे ले गर्दै हुनुहुन्छ, भने प्रविधि मा दिनेश निरौला र सचिन्द्र गौतम हुनुहुन्छ । मन्टेश्वरी राजभण्डारी ले सुत्रधार को काम गर्नुभएको छ । अडियो उपलब्ध गराउने श्रुति सम्बेग समूहलाई हार्दिक धन्यवाद !
Asha October 24, 2009 at 4:57 PM
ध्न्यबाद आकार जी .. स्कुल पढ्दा नै यो उपन्यास पढेकी थिएँ तर अहिले यहाँ फेरी सुन्न पाउँदा पूर्णताको महसुस भईरहेको छ अनी त्यो भन्दा नि बढी त अच्युत जी को बाचन शैलीले यसलाइ सुन माथि सुगन्ध थप्ने काम गरेको छ ...
Thank you Aakar ji for "Shirish Ko Phool" Series.. I really enjoyed it... I appreciate your effort.
अडियोमा शीरिषको फूल आएछ। राम्रो काम भयो। तर पुस्तकमा जति भावना, आवेग र संवेग अडियले दिन सके जस्तो लागेन। कोसिस राम्रो छ। त्यो मिडयमकै सीमितता होला सायद। नयाँ प्रविधिमा नेपाली साहित्यलाई राख्नु राम्रो कुरा हो। 'शीरिषको फूल'सँग धेरैका आ आफ्नै अनुभव होलान्। कोहीले यसलाई 'नबूझिने साहित्य' को कोटीमा राख्लान्। एसएलसी दिए लगत्तै मैले पनि त्यसै गरेको थिएँ। र कसैले 'विश्वस्तर'को साहित्य भन्लान्। मलाई यो बुझ्ने हुन पाँच वर्ष लाग्यो। र त्यो धैर्यता धन्न मैले पाएँछु। सायद चेतनाको लेबलको कुरा पनि होला बुझाइ। वास्तवमै गज्जब उपन्यास हो यो। शीरिषको फूल लेबलका नेपाली उपन्यास मैले पढ्न पाएको छैन(लेखकहरुले मन नदुखाउनु मैले नपढेका बुकहरु त्यो भन्दा राम्रा पनि हुनसक्छन्)नेपाली साहित्यमा निहिलिज्मको उच्चतम प्रयोगले पारिजातमा बुद्ध र पश्चिमा साहित्य दुवैको प्रभाव भेटिन्छन्। हर्मन हेस्सेको जीवनरुपी साहित्य र रविशंकरको सीतारवादनभन्दा यो निकै भिन्न छ। मतलब अपोजिट। तर बुद्धको शून्यवाद शीरिषको फूलको सुगन्ध हो। त्यो बास्नाले छोयो भने अझै पनि मलाई दुई तीन दिनसम्म ह्याङओभर भइरहन्छ।
आकारजीकी कोसिसलाई साधुवाद।